Tallaabada ugu horreysa ee Mashruuca Nidaamka Raadinta Mount Nemrut waxaa la qaadi doonaa Sanadkan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia02 AdiyamanTallaabada ugu horreysa ee Mashruuca Nidaamka Raadinta Mount Nemrut ayaa la qaadi doonaa Sanadkan
19 / 02 / 2020 02 Adiyaman, tareenka, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, Headline, TURKEY
Tallaabada ugu horreysa ee mashruuca nidaamka tareenka buurta nemrut ayaa la qaadi doonaa sannadkan
Adıyaman, oo goobjoog ka ahaa aragtida gaarka ah ee dhaqanka Commagene isaga oo ku maraya masraxa taariikhdiisa qani ah, taariikhdiisa dabiiciga ah iyo dhaqanka, ayaa isu diyaarinaya Bandhigga Caalamiga ah ee Nemrut.
Iyada oo uu hogaaminayo Maamulka Maamulka Adıyaman, kulan qiimayn ah ayaa lagu qabtay Bandhigga Caalamiga ah ee Nemrut, kaas oo lagu abaabuli doono iyada oo lagu taageerayo Dawlada Hoose ee Adıyaman iyo Jaamacada Adıyaman.
Duqa magaalada Süleyman Kılınç, Rector of Adıyaman University oo ah shirkii lagu qabtay hoteelka Hilton ee hoostimaada Gudoomiyaha Gobolka Aykut Pekmez si loo go'aamiyo khariidada wadada ee Bandhigga, oo la qorsheeyay in la qabto July ama September. Dr. Mehmet Turgut, gudoomiye kuxigeenka Bedir Deveci, madaxweynaha gobolka AK Party Mehmet Dağtekin, Xoghayaha guud ee maamulka gobolka Sami Işık, madaxweynaha ATSO Mustafa Uslu, madaxweynaha isweydaarsiga badeecadaha Mahmut Fırat, madaxweynaha OIZ Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Rugta Ganacsade iyo Craftsmen Ziya Duranay, Adıya Milkiileyaasha hoteelka, wakiillo ka socda warshadaha dalxiiska, Hawl wadeenada Dalxiiska iyo mas'uuliyiin wakiilo socdaal ayaa ka qeyb galay.
Intii lagu gudajiray kulanka oo uu shir gudoominayay Gudoomiyaha Aykut Pekmez, sameynta gudiga qaban qaabada xaflada iyo qeybinta waajibaadka kaqeyb galaya hey'adaha ayaa laga wada hadlay in munaasabada la qabto.
Khudbadda furitaanka kulanka, ayuu guddoomiye Aykut Pekmez yiri, “Bandhiggan wuxuu muhiim u yahay marka la eego kobcinta hantida dalxiiska ee Adıyaman, oo inta badan ah madxafka hawada furan. Sidaad ogtahay, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Mehmet Nuri Ersoy wuxuu yimid magaaladeena 4 bilood ka hor wuxuuna booqday meelaha taariikhiga ah iyo dalxiiska ee Adıyaman. Maamulka ahaan, waxaan u diyaarinay mashaariicaheena hagaajinta awooda dalxiiska Adıyaman. Gaar ahaan hoggaanka Wasiirkayaga, daraasad ayaa lagu sameyn doonaa sanadkaan dhismaha nidaamka tareenka illaa Mount Nemrut. Waxaan sidoo kale leenahay mashruuc ku saabsan ilaalinta tiirarka goobta Nemrut Ören waxaanan ku guuleysan doonnaa sanadkaan. Dhanka kale, waxaan heysanaa mashruuc loogu talagalay deegaanka iyo muuqaalka dhul gariirka Perre Ancient City, oo kamid ah 3-ta magaalo ee waaweyn ee Commagene Civilization, 5 KM ujirta bartamaha magaalada. Waxaan sii wadnaa dadaalkeena si aan meeshan uga dhigno xarun soo jiidasho ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha gudaha iyo dibedda iyo si aan u noqonno xarun soo jiidasho leh oo taariikhdu soo noolaato. Ku biirinta jaamacadayada, wasaaradeena ayaa dib ugu celisay barnaamijkan qodista. Waxaan bilaabi doonnaa shaqada qodista maalmaha soo socda. Mar labaad, si loo kordhiyo tirada dalxiisayaasha gudaha iyo shisheeyaha ee imanaya magaaladeenna iyo si loo hubiyo in dalxiisayaashu ay waqti badan ku qaataan bartamaha magaalada, shaqadeenna dib-u-soo-celinta waxay ku sii wadataa taariikha Tuz Han. Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska, Mr. Mehmet Nuri Ersoy, ayaa ka qeybgali doonta Bandhigga Caalamiga ah ee Nemrut, oo aan u tixgelinno gaar ahaan muhiim u ah dhiirrigelinta Adıyaman, oo ay u taageeri doonto wasaarad ahaan. Wasaaraddayadu waxay casuumi doontaa ka qeyb galka hawl wadeenada dalxiis ee caalamiga ah, wakaaladaha safarka, joornaalada, telefishanada iyo tiirarka dhagxaanta xafladda. Bandhigga aan damacsan nahay in la qabto Sebtember wuxuu qaadanayaa 4-5 maalmood. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku marti qaadno fanaaniinta, kuwaas oo codka ka bixin kara dalka iyo dibadaba, xafladda. Haddii aan ku qaban karno xafladda urur wanaagsan, waxaan rajeyneynaa inaan haysano dadaallo iyo daraasado si aan ugu dhawaaqno 2021 sanadka Nemrut. Waxaan qabanay kulankan si aan u helno fikradaha iyo aragtida wakiiladeena waaxda dalxiis ee qiimaha leh si xafladda aan u abaabuli doonno maanta noqon doonta mid midab leh oo qurux badan. ”
Duqa magaalada Süleyman Kılınç ayaa yidhi, Maanta waxaan abaabulnaa kulan wada tashi ah oo ay la yeelanayaan wakiilada waaxda dalxiiska ee qiimaha leh ee ku saabsan Bandhigga Caalamiga ah ee Nemrut oo aan abaabuli doono, si aan u helno tababar maskaxeed. Adıyaman waa magaalo leh awood weyn xagga dabeecadda, dhaqanka, dalxiiska, isboortiga iyo dalxiiska iimaanka. Waa lagama maarmaan in kor loo qaado tayada dalxiisayaasha magaaladan, oo leh awood badan oo hodan ah. Waxaan joognaa ugu sarreeya waddamada soo jiidata dalxiisayaasha ugu badan adduunka, laakiin waxaan ku jirnaa kaalinta 13-aad ee dayactirka dakhliga-abuurista. Maxaan sameyn karnaa xilliga cusub halkii aan ka dhaleeceyn laheyn dhaleeceynteena taariikhiga ah? Markuu tixgalinayo dhammaan qiimaha taariikhiga iyo dalxiiska ee Adıyaman leeyahay, waxay taageeri doonaan dabaaldeggan sidii Degmo ahaan ”.
Dhakhtarka Jaamacadda Adiyaman. Dr. Mehmet Turgut wuxuu yiri, "haddaan nahay jaamacadda Adıyaman, waxaan diyaar u nahay inaan sameyno wax walba oo nagu dhaca illaa dhamaadka dabaaldega si xamaasad leh."
Madaxweynayaasha ururada aan dowliga ahayn iyo wakiilo ka socda waaxda dalxiiska ayaa ka qeybgalay kulanka si is weydaarsiga looga dhigo International Nemrut Festival si xamaasad leh.
Talaabada ugu horeysa ee Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Trabzon
Nidaamka Mule Rail Railway ayaa imanaya Nemrut
Talaabada ugu horeysa ee Nidaamka Tiknoolajiyada fudud ee Kocaeli